Inguqulelo entsha yoVavanyo lweTekhnoloji yoSafari luyafumaneka ukhuphelo | Ndisuka mac
Inguqulelo entsha yoVavanyo lweTekhnoloji yeSafari luyafumaneka ukhuphelo
Inguqulelo entsha yongeza la manqaku matsha kunye nophuculo kuzinzo lwesikhangeli sika-Apple xa sele kudlule iiveki ezimbini kusungulwe inguqulelo yama-43. Ngayiphi na imeko, into ebalulekileyo kukuba esi sikhangeli sokuvavanya ebesikade sisisebenzisa kangangexesha elithile Elona qonga lokuvavanya libalaseleyo lesikhangeli seSafari ukusuka kwiApple kwiiMacs.
Esi sisikhangeli esizimeleyo nesisimahla esinokusetyenziswa ngumntu wonke ofuna kwaye oneMac, abasebenzisi abaninzi bazama esi sikhangeli, impendulo engakumbi efunyanwa nguApple dFumana iziphene kwaye usebenzise izilungiso eziyimfuneko. Kwakhona, njengoko sihlala sikhumbula kuhlaziyo olufikayo, ukuya mayifakwe akukho sidingo sokuba neakhawunti yonjiniyela kwaye nabani na unokuzikhuphelela ngokufikelela ngokulula kwiCompertino yomakhi wewebhusayithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Inguqulelo entsha yoVavanyo lweTekhnoloji yeSafari luyafumaneka ukhuphelo